Ny orinasanay - SAINTYOL SPORTS CO., LTD.
Ahitra maherin'ny 30.000 sqm no entina avy amin'ny systurf
Olona maherin'ny 300000 isan'andro no mampiasa vokatra systurf
Ny systurf isan'andro dia manatsara ny famolavolana ahitra, kalitao, fahatsapana ...
Ny marika kalitao malaza dia manompo any amin'ny firenena 40 mahery
Maherin'ny 25 taona niainana indostrialy
Fahaizana manokana haingo manokana ho an'ny fampiharana manokana anao
SYSTURFdia mpanamboatra matihanina manokana amin'ny indostria turf artifisialy, izay manao karazan-javakanto sy hazakazaka artifisialy indrindra, ary koa ny firafitry ny kianja fanatanjahan-tena toy ny jiro sy fefy. Ny ekipanay dia afaka manome mpanjifa manompo miaraka amina endrika fanatanjahantena matihanina miorina amin'ny habe.
Any amin'ny faritanin'i Jiangsu any Shina, dia mpanamboatra izay nanao ny R&D, ny famokarana sy ny varotra eo amin'ny sehatry ny turf artifisialy efa 25 taona mahery hatramin'ny 1992.
Izahay izao no mpanamboatra lehibe faharoa any atsinanan'i Sina, izahay dia nanome ho an'ny Carrefour EU / Bricorama FR / Sodimac SA / Adeo FR ho mpamatsy zokiolona (nankatoavin'ny kaonty fanodinam-bokatra), noho izany dia nanana mari-pahaizana sahaza izahay hamaly ny fangatahana mendrika rehetra nataonao.
Ny tohan-pamokarana misy anay dia manana fanohanana ara-teknika iraisam-pirenena, ao anatin'izany ny fampiasana ny milina fanondranana avy any COBBLE UK sy TURFCO USA. Ary koa ny vokatray rehetra dia mampiasa lakaoly avo lenta sy fitaovana Anti-UV avy any BASF Alemana. Dow Chemical no mpamatsy akora fototra anay. Izy rehetra mba hamokarana vokatra manerantany avo lenta sy fandefasana ny safidy tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay.
Tamin'ny taona 1992, ny SYSTURF dia niorina tamin'ny orinasam-bozaka ravaky fohy, taorian'ny fanitarana taona lasa izay, tamin'ny taona 2011, ny SYSTURF dia lasa iray amin'ireo mpanamboatra lehibe ao amin'ny faritaniny.
Tamin'ny 2012, ny SYSTURF dia nanambatra ny STI (Shanghai) ary nanolo-tena amin'ny fanatsarana ny elanelam-bokatra sy ny fametrahana ny paikadin'ny fanatontoloana.
Ankehitriny ny vokatra SYSTURF dia amidy manerantany amin'ny firenena maherin'ny 40 ao anatin'izany i Eropa / Amerika Avaratra / Amerika Latina / Moyen Orient / Azia ary Aferica.
Ato ho ato, ny drafitra SYSTURF dia hanampy ny mpanjifa manerantany maro dia maro ny mpivarotra ambongadiny / mpaninjara / mpivarotra mba hahatratra ny sary lehibe kokoa momba ny tanjon'ny varotra ary andao hiara-hiasa amin'ny tontolo maitso lehibe kokoa.
Hatramin'ny taona 1992
INTEGRITRA azo ianteherana matihanina
Ny SYSTURF dia nanofana andiana ekipa matihanina hahatratra ny sehatry ny fanatanjahantena sy ny fitakian-tany ho an'ny mpanjifa manerantany.